"Soo noqosho wanaagsan" - Sheekooyinka guusha
"Soo noqosho wanaagsan"
Ikraan - Dukaanley - Kismaayo
· Sheekooyinka guusha
Ikraan, oo ku dhalatay Kismaayo, waxaa lagu qasbay iney ka barakacdo gurigeeda dagaallo jira awgeed, islamarkaana degto xerada qoxootiga ee Dhadhaab, Kiiniya. Ka dib toddoba sano, Ikraan ayaa dib ugusoo noqotay Kismaayo.
"Hadda waxaan helaa dakhli igu filan" – Ikraan
Maaddaama ay fursadaha shaqadu yarayd, waxaa lagu qasbay inay raadiso shaqooyin aan habooneyn oo khatar ah. Kadib markii loo ogolaaday $ 800 oo amaaha oo ay ka codsatay KIMS, Ikraan waxay soo iibsatay laamayeeri si ay ugu dhisato dukaan, goob lagu keydiyo timirta, qalabka qurxinta, maraqa, baastada, iyo qaboojiyaha si loo iibiyo jallaatada.
Dukaanka waxay ka heshaa lacag ku filan oo ay ku bixiso cunnooyinka iyo iskuulka caruurteeda.
Ikraan waxa ay si joogto ah u bixisaa deynta, waxaana ay haatan rabtaa inay codsato kaalin labaad oo amaaha. Taasoo awood u siinaysa inay kor u qaado saamigeeda waxayna u adeegtaa macaamiisheeda si wanaagsan. Ikraan, waa mid ka mid ah in kabadan 1,000 qof oo Dhadhaab dib ugasoo laabtay dalka; kuwaasoo KIMS ku taageertay hab nololeed waara.
"Dib-udhiska warshadda kallumeysiga Somalia"
Rajo wanaagsan iyo riyo cusub